China Imidazole Kugadzira uye Fekitori | Vakasununguka
CAS Kwete: Kugoverwa
Kuchena (GC): ≥99%
25kg / Fiber dhiramu, 9Mt / FCL
UN 3263, Kirasi: 8, Kurongedza boka: III
☑ Kuporesa mumiririri kana accelerator ye epoxy resini;
Muindasitiri yemishonga, vepakati veimwe API, senge Imazalil, Tioconazole, Bifonazole.
☑ Yakakosha mishonga yezvipuka mbichana ye synergist ye boric acid, kugadzirira kwemushonga wezvipembenene uye bhakitiriya.
Id Imidazole chinhu chakakosha mbishi uye chiri pakati chemakemikari indasitiri, ine zvakawanda zvekushandisa. Imidazole haipo chete mu purine amino acids ye ribonucleic acid uye deoxyribonucleic acid, asiwo maamino acids. Panguva imwecheteyo, ndicho chikamu chinoshanda chechimiro chezvipembenene zvakawanda, enzyme inhibitors, zvinodhaka nemakemikari akanaka. Naizvozvo, imidazole uye zvigadzirwa zvayo zvagara zviri nzvimbo yekutsvagisa. Nekuti iyo imidazole mhete ye imidazole nemidziyo yayo ine maatomu maviri enitrogen, ayo anogona kushandiswa seyakareruka mupi wemagetsi, imidazole iriwo rimwe remapoka anonyanya kushandiswa anoshanduka simbi yesimbi kemisitiri.
IdImidazole inogona kushandiswa kurapa mumiririri we epoxy resin, kugadzirisa michina zvivakwa zvezvinhu zvakadai sekukotama, kutambanudza uye kumanikidza, kugadzirisa magetsi emagetsi ekuputira uye kusagadzikana kwemakemikari. Inoshandiswa zvakanyanya mumakomputa nemagetsi emagetsi; inoshandiswa mumapuraneti edunhu akadhindwa uye maseketi akasanganiswa seantirust mumiriri wemhangura; inogona zvakare kushandiswa mune zvemagetsi zvigadzirwa;
IsIyo inoshandiswa seyemishonga mishonga mbishi, senge antifungal vamiririri, antifungal vamiririri, hypoglycemic vamiririri, yekugadzira plasma, trichomonal vamiririri, bronchial asthma vamiririri, anti rash vamiririri, nezvimwe; inoshandiswa senge mishonga yekuuraya zvipuka, synergist ye boric acid vamiririri, kugadzirira mishonga yekuuraya zvipuka uye fungicides; Uye zvakare, inoshandiswawo se urea formaldehyde resin inorapa mumiririri, mifananidzo yemishonga, zvinonamatira, machira, ekurapa mairabhoni, anopikisa mapundu, nezvimwewo Izvo zvinhu zvakasvibirira zvemagetsi emagetsi uye organic synthesis yepakati.
Experience Anopfuura makore makumi matatu ekugadzira ruzivo;
Material Zvinhu zvakanyoreswa pasi pemitemo yeEU-REACH;
☑ Chigadzirwa chinotenderwa nenyika zhinji mumakambani akati wandei;
☑ Just-in-nguva Dhirivhari: 1 vhiki yekutungamira nguva.